China ny fizotry ny famokarana mpamokatra sy mpamatsy mavo oxide vy | Shencai Pigment
fizotry ny famokarana mavo oksida vy
Ny mavo oksidana vy dia loko mavomavo vovoka mangarahara. Ny hakitroka somary 3.5. Milamina ny fananana simika. Ny haben'ny sombintsombiny dia 0.01-0.02 μ M. Manana velarantany lehibe manokana (manodidina ny 10 heny amin'ny oksida vy mahazatra), ny fitrohana ultraviolet mahery, ny fanoherana ny hazavana, ny fanoherana ny atmosfera ary ny fananana tsara hafa. Mangarahara ilay sarimihetsika ary manana toetra tsara. Ahoana ny fomba hanaovana mavo ny oksida vy?
Fomba: fomban'ny oxidation sulfate ferrous: ny asidra solifika dia misy fiatra vy miaraka amina vy mamorona sulfate ferrous. Ny sodium hidroksida dia asiana ary ny rivotra no ampiasaina hanamboarana oksizenina hiomanana amin'ny vatan'ny kristaly. Ny sulfate ferrous sy vy dia ampidirina ao amin'ny fampiatoana ny vatan'ny kristaly, nafanaina ary notsofina tamin'ny rivotra ho fanidinana. Ny mavo oxide ferric dia voaomana amin'ny fanivanana tsindry, fanasana, fanamainana ary fikosehana.
Fe + H2SO4 → FeSO4 + I2 ↑
FeSO4 + 2NaOH → Fe (NY) 2 + Na2SO4
4Fe (NY) 2 + O2 → 4FeOOH + 2H2O
H2SO4 + Fe + 7H2O → FeSO4 · 7H2O + I2 ↑
FeSO4 · 7H2O + O2 → 2fe2o3 · H2O ↓ + 4h2so4 + 2H2O toe-javatra misy fihetsika: asio potika vy 74g ao anaty asidra solifara 15% mandra-panjavon'ireo potika vy, ary mamorona solifara ferro miaraka amina fatra 200g / L. Ampy tsara 30% sodium hidroksida nampidirina tao anaty vahaolana ferrous sulfate, ary ny 40% n'ny vy manontolo dia navadika ho ferrous hidroksida [Fe (OH) 2] tamin'ny fikorontanana mitohy, ary ny vy dia ampidinina ho any Fe mba hamorona vatan'ny kristaly amin'ny 30 ~ 35 ℃. Avy eo nampidirina tamin'ny fangaro 90 g / L ny fangaro mba hamorona vovoka kristaly 7 g / L ary sulfate ferrous 40 g / L, ary avy eo nohafanaina 85 ℃ ho an'ny oksiôma-drivotra amin'ny hafainganana 600 L / h mandritra ny 64 ora, ary avy eo notivanana, nosasana, maina ary notorotoroina mba hahazoana mavo hidrokarma ferro.